Jiro Solar Bollard
Ny jiro amin'ny masoandro dia hitondra tombony ho an'ny olombelona, ​​Amber ho ampahafantarinao
Fotoana fandefasana: Oktobra-15-2021
Ny fisian'ny vokatra angovo avy amin'ny herin'ny masoandro dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'ny olona, ​​nanomboka tamin'ny hezer-drano amin'ny masoandro ka hatrany amin'ny fiara-masoandro ka hatrany amin'ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro taty aoriana, ny fampiharana ny angovo avy amin'ny masoandro dia tsy vitan'ny famahana ny olan'ny angovo ho an'ny olombelona ihany, fa koa nitana andraikitra fiarovana ho an'ny natiora. . Fantatsika rehetra fa ny solika, arina ary loharanon-kery hafa, amin'ny fahazoana herinaratra miaraka amin'izay dia hamoaka etona fandotoana marobe koa, mampidi-doza ny velona ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tombony amin'ny jiro LED sy ny faritra fampiharana
Fotoana fandefasana: Sep-29-2021
Jiro an-dàlam-by maro no tarihina loharanom-pahazavana, maninona ny jiro amin'ny masoandro no mampiasa an'ity karazana loharano jiro ity, ny tombony azony ahoana? Ity manaraka ity izahay Changzhou Amber Lighting Co., Ltd. hampahafantatra anao ny tombony azo avy amin'ny loharanom-pahazavana eny an-dalambe. Voalohany indrindra, ny fahombiazan'ny taratra tariby dia nahatratra 120Lm / W, izay mihoatra ny sandan'ny jiro mitsitsy angovo. Izy io dia hahatonga azy io ho iray amin'ireo loharano maivana hazavana avo indrindra. Faharoa, ny herin'ny t ...Hamaky bebe kokoa »
Ny maha-zava-dehibe ny mpamokatra hazavana an-dalambe aorian'ny famoahana ny varotra
Nivoatra tsikelikely izao ny vokatra jiro eny an-dalambe ary mihamaro hatrany ny jiro amin'ny masoandro izay niditra tamin'ny fahitanay. Noho io antony io dia mihamaro hatrany ireo mpamokatra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay manomboka miakatra, ary misy olona sasany aza mivadika hanao io sombin-jiron'ny masoandro io. Tamin'ny voalohany dia zavatra tsara ity, hisy ny fifaninanana hananana tsindry ihany koa, fa miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia nanova tsiro tsikelikely ny fifaninanana. Misy ny fitsangantsanganana amin'ny masoandro ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fitsapana ny kalitaon'ny jiro amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny
Fotoana fandefasana: Sep-10-2021
Noho ny fampielezana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro vaovao be mpitia, lasa manakiana ny fomba fividianana jiro an-dàlana amin'ny alàlan'ny masoandro avo lenta, maro ny mpandraharaha tsy mitandrina no miahy fotsiny ny tombontsoany tsy mijery ny kalitaon'ny vokatra, izay manimba be ny endrik'ity asa ity ao amin'ny mason'ny besinimaro, izao dia hampianariko misafidy jiro arabe amin'ny masoandro avo lenta izahay. Changzhou Amber Lighting Co. dia mpamokatra hazavana an-dalambe tompon'andraikitra mazava ho azy ...Hamaky bebe kokoa »
Fanomezana iray hafa ny jiro amin'ny masoandro voajanahary
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina mitohy, ny vokatra teknolojia dia miraraka hatrany amin'ny fiainan'ny olona, ​​vokatra teknolojia amin'ny fanamorana ny fiainan'olombelona amin'ny fotoana iray ihany, fa koa hitondra angovo vaovao, mba hihatsara kokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona, ​​ny tena solontena dia ny arabe amin'ny masoandro jiro. Ny fipoahan'ny jiro amin'ny masoandro dia fomba iray hafa fanomezana voajanahary ho an'ny olombelona. Manazava an'izao tontolo izao ny masoandro ary manampy antsika hiaina tsaratsara kokoa, ary ny jiro amin'ny masoandro dia manampy antsika misento ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana no hahitanao ny olan'ny jiro amin'ny masoandro? Ahoana ny fanamboarana ireo jiro amin'ny masoandro?
Amin'izao fotoana izao dia mihabetsaka ny fampiasana jiro amin'ny masoandro, ary izany dia hitaky ny fahatakaran'ny olona ny fomba hijerena na hanamboarana ireo jiro amin'ny masoandro rehefa tsy mandeha izy ireo. Ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hialana amin'ny olan'ny jiro masoandro ary ny antony hitrangan'izany? Ny jiro avy amin'ny masoandro dia manana ampahany efatra lehibe, loharanom-pahazavana tariby, panneaux solaire, bateria lithium ary mpanara-maso. Ary ireo olana ny ankamaroany dia avy amin'ireo faritra ireo. ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana mpanamboatra jiro amin'ny masoandro?
Fotoana fandefasana: Aug-12-2021
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny teknolojia angovo vaovao dia nahatonga ny tsena fahazavana eny an-dàlana ho lehibe kokoa. Ny jiro amin'ny masoandro dia mampiasa ny hazavan'ny masoandro voajanahary, navadika ho herinaratra, mitsitsy loharanon-kery. Manala ny endrika nentin-drazana ny famatsiana herinaratra tariby tariby koa, ny fisorohana ny fahanteran'ny fizaran-tany, ny jiro amoron-dàlana sy ny kalitaon'ny fanamboarana dia tsy mendrika ary ny tsy fahombiazan'ny fizaran-tany dia misy fiantraikany amin'ny fiarovana, ny fampiasana azo antoka. Amin'izao fotoana izao, ny ...Hamaky bebe kokoa »
Karazan-jiro 4 an'ny jiro masoandro amidy indrindra amin'ny 2021
Karazan-jiro 4 mamidy amin'ny masoandro be indrindra amin'ny 2021 Mety ho fantatrao fa malaza be ny jiro amin'ny masoandro ankehitriny, saingy fantatrao ve hoe firy ny karazana jiro masoandro be mpividy indrindra? Ity misy torolàlana feno. Amin'izao fotoana izao, ny angovo madio dia mitana andraikitra lehibe amin'ny teny, satria mifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika, ary izany indrindra no mahatonga ny jiro amin'ny masoandro hanjary be mpampiasa kokoa. ...Hamaky bebe kokoa »
Famokarana ho an'ny orinasa mpamokatra hazavana Solar Bollard
Amin'ny maha-orinasa matihanina jiro bollard matihanina anay dia nanao jiro zaridaina masoandro be dia be izahay, volavolan-masoandro ho an'ny mpanjifanay. Ny iray amin'ireo mpanjifanay avy any Arabia Saodita dia nametraka 300 pcs, etsy ambany ny sasany amin'ireo sary famokarana. Ny orinasan-jiro Solar Bollard dia manana varotra tena tsara tokoa ankehitriny, satria ny bollard amin'ny masoandro dia azo ampiasaina ho lalan'ny masoandro / plaza / faritra / fiarovana / tokontany. Ity karazana jiro ity dia tsy mila mifandray amin'ny tambajotra elektrika lehibe, ary tsy mila ...Hamaky bebe kokoa »
Inona avy ny hazavan'ny masoandro modely ho an'ny olombelona?
Hatramin'ny nahaterahan'ny zanak'olombelona, ​​amin'ny lafiny iray, ny olombelona dia mankafy ireo fitahian'ny natiora, raha etsy an-danin'izany, dia nitolona tamin'ny loza isan-karazany nateraky ny natiora izy ireo. Ny hazavan'ny masoandro, ny rivotra, ny rano, ny tany, ny ala, ny ranomasimbe, dia loharano manankarena rehetra entin'ny natiora ho an'ny olombelona, ​​raha ny viriosy, ny aretina, ny maizina, ny fandotoana, ny horohoron-tany, ny volkano ary ny tafiotra dia loza voajanahary. Amin'ny tolona maharitra, etsy andaniny, ny olombelona dia niasa mafy nandinika ny ess ...Hamaky bebe kokoa »
Jiro fiarovana ny masoandro
Ny mpampanonta anay dia manadihady, mizaha toetra ary manome ny vokatra tsara indrindra; afaka mianatra bebe kokoa momba ny fizotran'ny fanadihadianay eto ianao. Mety handoa komisiona amin'ny fividianana avy amin'ireo rohy nofidinay izahay. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny jiro avy amin'ny masoandro dia novolavolain'ny fitsangatsanganana. Mamela anao hampiasa ny angovo azo antoka amin'ny masoandro ao an-tokotaninao izy ireo, eo amin'ny terras na koa eo amin'ny lavarangana. Mila mandany ora vitsivitsy amin'ny toerana ahantonanao jiro isan'andro fotsiny ianao. Avy eo, saika afaka mamita ...Hamaky bebe kokoa »
Inona ny fampandrosoana ny Solar Pathway & Garden Light?
Miaraka amin'ny sivilizasiona sy ny fivoaran'ny zanak'olombelona, ​​tamin'ny taona 1970 dia hitan'ny olona fa ny fametrahana jiro amoron-drindrina amin'ny rindrina dia tsy vitan'ny hoe naka toerana sy loharanon-karena fotsiny, fa koa nahatonga ny olona hahatsiaro ho ketraka sy ahiana ho voaro. Amin'ny ankapobeny dia rehefa nisy jiro ny lalan'ny masoandro sy jiro amin'ny zaridaina satria ny olona dia maniry fametrahana tsotra sy toerana fametrahana kely kokoa. https://www.amber-lighting.com/all-in-one-solar-bollard-light-sb21-rgbcw-product/ Hatramin'ny ...Hamaky bebe kokoa »